Ku soo dhawaw Tranås – Waa laguu baahan yahay! Tranås oo ah degmo Småland waxeey ka mid tahay magalooyinka yaryar ee iswiidhan oo ruuntii korto, qorsheeyneeysana in ee sii korto. Hadafkeenu waxuu yahay in ahaano 20 000 oo qof sanadka 2025. Waxeey degmadu ku taala meelaha Iswiidhan xiisaha leh oo weeynaanayo uuna dhow Linköping iyo Jönköping. Halkaan waxaa lagu soo bandhiga tayo nololeed oo sareeyso, jawi shirkadeed oo xoog leh iyo dabiicada bada uu dhow oo ku taalo magaalo ganacsiga caado uu leh. Uu dhawaanaanshaha shaqada, xanaanda caruurta, waxbarashada, xiisaha xilliga firaaqada iyo baashalka Tranås waxuu keenaa in waqti badan ku sii hore oo aad isticmaali kartid waxa adiga muhiim kuu ah.
Kireeysasho, iibsasho, dhisid – Tranås hab badan oo degaan lagu doorta ayaa jiro. Waxaan lee nahay dhowr badan oo milkaayaale guri oo leh guriyaal la kireeyo iyo kuwo la iibiyo. Lambarka telefoonka ee milkiyaasheena-guriyada iyo boggag dalaalka gudaha waxaad ka heleeysaa bogga degmada.
Af carabi iyo dari ayaa ah koox-luqadeedka ugu weeyn laakin halkaana waa looga hadlaa af soomali, afka holland, afka roomaania iyo in kale.
Tranås waxeey lee dahay soo bandhig badan marka ee ku saabsan tahay ururo. Degmada diiwaankeeda-urureed ayaad ka heleeysa liis leh warbixin ku saabsan ururo iyo dadka la xariiri karo.
Qaar ka mid ah ururada waa:
Ururka Dhaqanka Libaneeyska/Suuriyaanka
Ururka Afrikaanka ee Tranås
Xafiiska-dalxiiska iyo xafiiska adeega Tranås Direkt waxeey ku wada yaalin hal goob oo ku taalo Storgatan 22 ee bartamaha. Halkaan dadka degmada soo booqdo iyo kuwa daganba dhamaantood waxeey ka helayaan adeeg xirfadeed iyo caawimaanad ku saabsan su’aalo kala duwan. Tranås waxaa joogo toobaraha-muwaadinka oo caawin karo qofka goor dhow uu soo guuray degmada. Toobaraha-muwaadinka waxaa si toos ah loogala xariraa Tranås Direkt.
Storgatan ee ku yaalo Tranås waa goob iibsi oo la jecelyahay ayadoo ee keentay taasi dukaamada, dukaamada waa weeyn, biibito raaxo leh iyo maqaayadaha. Sido kale Storgatan waxaa ku taalo maktabadeena-magaalo. Bogga degmada ka akhriso in dheerad oo ku saabsan waxyaalaha aad ka dhex sameeyn karto kana dhex arki karto Tranås.
Xanaanada furan waa goob kulan oo loogu tala galay dadka waa weeyn ee leh caruurta uu dhaxeeyo 0-6 sano oo lagu wada soo dhaweeynaayo. Xiliyada ee furanyihiin ee hada taagan iyo barnaamiyada waxeey ku jiraan bogga degmada. Degmada Tranås waxaa ku yaalo dugsiyaalo xanaano oo badan. Warbixin iyo warbixinta-xariirka dugsiyada xanaanda dhamaantod waxaad ka heleysaa bogga degmada Tranås.
Degmada Tranås waxeey lee dahay dugsiyaalo hoose oo badan. Bogga degmada waxaad ka heleeysaa warbixin ku saabsan iskuulada iyo warbixin-xariirka iskuul kasto. Dugsi sare ee Holaved waa dugsiga sare ee Tranås. Booqo boggooda si aad uu hesho warbixin dheeraad ah oo ku saabsan iskuulka iyo waxbarashadiisa.
Xarunta-waxbarshada Västra Vux waxaa lagu soo dhaweeynaa dhamaan inta dhaaftay 20 sano si ee wax ugu bartaan ama raadshaan jiheeyn-waxbarasho oo laga raadinaayo waxbarashada dadka waa weeyn ee degmadeed. Ku soo dhawaaw in aad la soo xariiro jiheeynta-waxbarshada Västra Vux si aad uu hesho warbixin ku saabsan fursadaado-waxbarasho.
Dugsiga dadka waa weeyn ee Sommenbygden waxuu ku yaala bartamaha Tranås, waxuuna 10 daqiiqo uu jiraa xarunta-safarka Tranås. In dheer aad oo ku saabsan ka akhriso.
TUC Sweden waa shirkad gaar ah oo soo bandhigto waxbarasho sare ee xirfadeed iyo koorsooyin uu haboon shirkado oo lagu qabanaayo bey’ad waxbarasho oo qurxoon, lehna goob shireed iyo biibito. Dugsiga waxbarashada sare ee xirfada TUC waxuu ka mid yahay isku daberidaha ugu weeyn gobolka ee dhanka waxbarashada sare ee xirfadooyinka. Iskuulka waxuu ku yaala bartamaha Tranås, waxaana si sahlan ugu taga kartaa lug, baskiil, bas, tareen ama gaari. Masaafad-safareed oo ka baxsan Tranås waxaa ku taalo Jaamacada Linköping iyo Jaamacada Jönköping.
Rugta caafimaadka Tranås waxeey ka kooban tahay qaabilaad dhakhtareed ee degmadeed, qaabilaad kalkaaliso degmadeed, qeeybta baxnaaneeynta iyo sheeybar iyo qeybta raajada ee ku xiran qaabilaadyada. Rugta caafimadka wadashaqeeyn hormarsan la lee dahay isbitaalka Höglands ee Eksjö iyo degmada Tranås.
Läkarhuset i Tranås AB waa rug caafimaad oo sii buuxa uu qalabeeysan kuna taalo Tranås. Daryeel guud oo daweeyn ma ahane waxaa lagaa caawin kartaa cadeeyn, baaritaan caafimaad iyo talaalo.
Xarunta reerka Tranås waa goob-kulan oo loogu tala galay caruurta, da’ yarta iyo dadka waa weeyn. Halkaan waxaa isla wada shaqeeyo degmada iyo maamulka gobolka caafimaadka ayadoo ee ula jeedadu tahay in caafimaadka la soo hormariyo iyo hormarka. Xarunta reerka waxaa laga helaa daryeelka caafimadka caruurta, daryeelka caafimaadka dumarka, qaabilada dhalinyarada, hoowlaha reerka, qeeybta caafimaadka ardayga ee Smedjan, xanaanad furan iyo talo bixinta reerka.
Markii xariir lala yeelanaayo hey’addaha waxaa jirto fursad lagu helo caawinaad-turjumaan.
Tranås waxaa si sahlan ugu tagi kartaa Jönköping iyo Nässjö adigoo raacaayo gaadiidka-gobolka Jönköping. Gaadiidka-Östgöta adigoo raacaayo waxaad kiu tagi kartaa Mjölby, Linköping iyo boosteejooyinka uu dhaxeey. Goobta-duulimaadka ugu dhow waa Linköping City Airport.
Shaqo dhiibayaasha waa weeyn ee Trånas waa Degmada Tranås, Montico, Bosch Thermoteknik, Pastejköket, EGF, Materia, Euroform, Carpenter iyo in kale.
Affärschef sökes till Mekonomens butik i Tranås! Butikschef
Chaufför / bärleverantör Distributionsförare
Vik. Brevbärare , Tranås Brevbärare
Lagerpersonal till Tranås Lagerarbetare
Personlig assistent till en tjej på 30 år i Mjölby Personlig assistent
Ung kvinna söker personlig assistent i Tranås Personlig assistent
Distributör av morgontidningar / paket till Tranås Tidningsbud/Tidningsdistributör
Ingen tidigare erfarenhet krävs / Säljare sökes till Tranås Utesäljare
Personlig assistent till 61% schemarad till kvinna i Tranås Personlig assistent
Personliga assistent till ett barn Personlig assistent
Personlig assistent åt en yngre kvinna Personlig assistent
Visualiserare / Grafisk Designer Webbdesigner
Kundservice - & Säljsupportchef , Tranås Kundtjänstchef
Förskollärare , förskolan Lukas , Tranås Lärare i förskola/Förskollärare
Golden Thai Restaurang Tranås Servitör/Servitris
Bogga 1 ee ka mid ah 5
Jönköping 75 km
Linköping 75 km